Tartankeena Muhiimka ah | GIGALIGHT
Qalab Hal-Joog ah
In ka badan toban sano 'horumarinta, Gigalight hadda waxay leedahay khadadka sheybaarrada shebekadaha shabakadaha badan ee isku xidhka iyo codsiyada gudbinta. Kuwaas products waxaa ka mid ah qalabka wax lagu gudbiyo, fiilooyinka firfircoon ee indhaha, MTP / MPO cabling products, qaybaha indhaha, iyo fiidiyoowga iwm. Gigalight wuxuu leeyahay saddex qaybood oo wax soo saarka ah oo loo qoondeeyey inuu macaamiisha siiyo mashaariicda iyo adeegga guud ee wax soo saarka iyo adeegga.
Tiknoolojiyada La isku halayn karo
Gigalight waxay leedahay saddex teknoolojiyad mashiin indhaha lagu kalsoonaan karo: VCSEL, PSM4 / PSM8 (Isbarbardhiga Hal-Habka 4/8-lane), iyo 4WDM/CWDM4. Teknoolojiyaddani waxay yareynayaan kharashka products, oo waxay ka gudubtay laba-laabida 85 imtixaanada kalsoonida, taas oo damaanad qaadaysa amniga gudbinta xogta weyn.
Nidaamka Maareynta Horumarka
Gigalight waxay si madaxbanaan u soo saartay Nidaamkeeda Waxsoosaarka Waxsoosaarka (MES), nidaamka waxsoosaarka gudiga elektarooniga ah, nidaamka tooska ah ee hagaajinta & nidaamka tijaabada (qalabka wax lagu beddelo), iyo nidaamka muuqaalka amar & alaabeed. Waxaan horumarinaynaa nidaamka wax soo saarka daruuraha (inuu furnaado bisha Sebtember, 2018) si loo soo ururiyo dhammaan awoodaha si loo xaqiijiyo wax soo saarka iyo maaraynta macaamiisha macaamiisha ah.
U-adkeysi awood leh
Tan iyo 2006, Gigalight wuxuu si isdaba joog ah u baareynaayey softiweerka & iswaafajinta qalabka ee qalabka wax lagu wareejiyo iyo dhisida saldhig aqoon aqoon iswaafajin. Waqtigan xaadirka ah, qalabka wax lagu beddelo ayaa la jaan qaadaya noocyada waaweyn ee adduunka. Waad ku mahadsan tahay waayo-aragnimada u adeegida macaamiisha yaryar & kuwa dhexdhexaadka ah ee adduunka, Gigalight wuxuu leeyahay awood wax ku ool ah oo habeyn ku habboon.
Nidaamka Cusub ee Dibadda
Gigalight waxay leedahay in ka badan 10 sano faa iidooyin farsamo oo ku saabsan R&D iyo soo saarista qalabka wax lagu kala wareejiyo iyo aaladaha kale ee indhaha, waxayna si tartiib tartiib ah u weerartay nidaamka deegaanka ee qalabka wax lagu beddelo. Nidaamka deegaanka wuxuu ka kooban yahay barnaamij barnaamij daruur oo lagu ogaanayo in la habeeyo koodhinta optics-ka, tijaabinta khadka tooska ah, baaritaanka macluumaadka qadka tooska ah iyo la falgalka adeegga daruuriga; nidaamka cusbooneysiinta qalabka fog; taxane ah hubiyeyaasha optic transceiver; iyo nidaamka wax soo saarka daruurta oo la soo saaray.
5 Xeeladaha Tiknoolajiyadda Core